Kimera: Chọpụta otu ị ga-esi nwetakwu ike maka mgbatị gị!
Squats: Kedu ihe omume kacha mma? Lelee ndụmọdụ dị egwu!
Ihe mgbakwunye	 10 December 2018
You na-aga mgbatị ahụ kwa ụbọchị, na-eri nri kwesịrị ekwesị, anaghị a alcoholụ mmanya ma ọ bụ sịga, ma ị rụpụtaghị ihe ị tụrụ anya na mgbatị gị? Ma eleghị anya, ọ bụ oge gị ka itinye ego na a àgwà nri emeju! Yabụ ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ime ka mgbatị gị dịkwuo mma, belata pasent abụba gị ma belata ibu, mgbe ahụ Kimera nwere ike ịbụ ihe ziri ezi maka mkpa gị.
Ọ bụrụ na ịmaghi mgbakwunye a, ọ ga-eju gị anya mgbe ị matara uru ya niile na ihe ọ bụla ọ nwere ike ime iji bulie mgbatị gị ma bulie uru ahụ gị.
You chọrọ ịmata? Anyị ga-ekwurịtakwu banyere Kimera n’isiokwu ndị a. Nọnyere anyị ruo ọgwụgwụ na-eju!
Kedu otu na ebe izu ahia na onu ahia kacha ala?
Anyị na-atụ aro ka zụọ Kimera naanị na websaịtị gọọmentị nke Onofre, nke a pụtara na ị gaghị ahụ ya n'ụlọ ahịa mgbakwunye ma ọ bụ ụlọ ahịa ọgwụ. Na weebụsaịtị nke Nolọ ahịa ọgwụ nke Onofre ị ga-ahụ ọnụahịa na nkwalite kachasị mma, na mgbakwunye na ịnweta ngwaahịa dị mma n'ụlọ, na-enweghị adịgboroja ma ọ bụ wayo, na n'ime oge echere na oge ịzụta.
Ihe ọzọ dị mkpa gbasara ịzụta Kimera bụ na enwere ike iji kaadị akwụmụgwọ ọ bụla mee ya, Onofre na-enyekwa usoro ịkwụ ụgwọ dị mma. N'ikpeazụ, anyị na-ekwusi ike na ịzụ ahịa na ahịa ọgwụ Onofre bụ nchekwa zuru oke, na data nkeonwe gị na nkọwa kaadị kredit gị ga-echebe ma bụrụ ihe nzuzo. Echegbula!
Na Onofre, na mgbakwunye na ịchọta thermogenic Kimera, ị nwekwara ike were Kimera Nwanyị na Oke. Ha niile juputara na uru ndi ozo.
Pịa n'okpuru iji zụta Kimera gị ugbu a!
Kedu ihe bụ ego nke Kimera?
Kimera nwere oke ọnụ ọnụ ma e jiri ya tụnyere mgbakwunye ndị ọzọ na ahịa. Lee n'okpuru ego ole ị ga-akwụ ma ọ bụrụ na ị zụrụ nke gị ugbu a.
Dị ka anyị kwurula, Onofre bụ ụzọ kachasị mma iji zụta ngwaahịa a, ọnụahịa ya bụ nke kachasị mma ma e jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Zụta igbe nke mkpụrụ ọgwụ 60 ị ga-akwụ naanị ụgwọ R $ 68,99, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ oge 2 nke R $ 34,50.
Ebe nrụọrụ ahụ na-enye nnukwu ọnọdụ ịkwụ ụgwọ ma ị nwere ike ịhọrọ ịkwụ ụgwọ site na kaadị kredit (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, na Hipercard), na ego site na mmịba ụlọ akụ, ego ma ọ bụ ego.
Pịa ebe a ma zụta Kimera gị n'oge na-adịghị anya ma nwee nsonaazụ ya
* Icheta na ọnụahịa nwere ike ịdị iche.
Kedu ihe bụ thermogenic Kimera? Olee otú o si eme omume?
Kimera bụ ihe mgbakwunye eke nke nwere ihe na-ekpo ọkụ, ya bụ, ọ na-eme ka ị ghara iwekwu calorie na abụba. Nke a pụtara na ọ bụrụ na mgbatị ụfọdụ ị gbara calorie 500, na-eji Kimera ị nwere ike ida calorie 800 otu usoro mmega ahụ.
Ihe ọzọ ị kwesịrị ịma bụ na mgbakwunye ahụ na-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ị na-azụ ọzụzụ oge niile, ebe ọ bụ naanị na ọ na - eme ka mgbatị ahụ dịkwuo mma. Nke a na-eme ka ọ dabara onye ọ bụla, site na ndị na-amalite ịzụ ugbu a ma nwee usoro na-adịghị achọkarị, yana ndị mmadụ bụbu ndị na-eme egwuregwu, ndị na-eme egwuregwu ahụ, ya bụ, ndị nweelarị ọzụzụ dị arọ karị.
Kedu ihe mejupụtara ngwaahịa a?
Banyere ihe mejupụtara nke Kimera, ị kwesịrị ịma na ọ bụ usoro pụrụ iche, ya bụ, ị gaghị ahụ ya na mgbakwunye ọ bụla na ahịa. Isi ihe ọzọ dị mkpa bụ na ọ bụ ngwaahịa sitere na naanị ihe ndị sitere n'okike, ọ bụ ya mere na ọ nwere ike were ya ọ bụla ma ọ naghị ewekarị mmeghachi omume siri ike.
Ezubere usoro ya maka gị iji mezuo ebumnuche gị, na-ebute ahụike gị oge niile.
Lee n'okpuru ihe Kimera mejupụtara:
Kedu ka esi ewere Kimera?
Kimera bụ mgbakwunye na capsules ma kwesiri iwere kwa ụbọchị. A na-atụ aro ka ị rie capsules abụọ, otu ugboro n'ụbọchị. Ọ na-abụkarị 30 ruo 40 nkeji tupu ọzụzụ. Achọpụtala rịzọlt a n'izu mbụ.
???? Chọrọ inwe ahụ ị na-atụ anya ya mgbe niile? Gbanyụọ abụba ndị ahụ metụtara ma nwekwuo ume maka mgbatị gị? Pịa ebe a ma zụta Kimera gị ugbu a!
Enwere m ike ịzụta na Free Market?
Ihe kachasị mma bụ na ịzụta ngwaahịa gị naanị na ụlọ ahịa ọgwụ weebụsaịtị Onofre. Nke a bụ ụzọ iji kwe nkwa ọnụahịa kachasị mma yana nkwa nke nsonaazụ na afọ ojuju. Ọ bụrụ n ’ịchọta ngwaahịa a maka ịre ahịa n’ụlọ ahịa ma ọ bụ saịtị dịka Mercado Livre, mara na ha nwere ike bụrụ mgbakwunye mgbakwunye adịgboroja, na ịzụta ha na-etinye ịzụta gị n’ihe egwu.
You nwere contraindications ma ọ bụ mmetụta ndị ọzọ?
Dịka mgbakwunye mgbakwunye nri ọ bụla, Kimera nwekwara mmachi n'iji ya eme ihe. Womenmụ nwanyị dị ime, ụmụaka, ndị agadi na ndị nwere nnukwu ọrịa ekwesịghị iji ya na -enweghị nlekọta dọkịta. Ọzọkwa, nsonaazụ ya dị obere, mana mgbe ha mere, ha na - ejikọtakarị ya na ọnụọgụ obi dị elu, ebe ọ bụ mmejupụtara iji mee ka metabolism gị dịkwuo elu.
Echefula ohere iji nwee mgbatị ahụ siri ike karị na nsonaazụ ngwa ngwa. Zụta nke gị ma were uru ọnụahịa na ọnọdụ pụrụ iche.
Uru nke thermogenic Kimera
N'okpuru ị ga-ahụ ihe nzuzo nke ngwaahịa a na-aga nke ọma. Anyị edepụtara ụfọdụ uru ya ka ị wee mara otu Kimera nwere ike isi gbanwee ndụ gị na ahụ gị. Lelee!
arụ ọrụ oxidizing
Ike na njikere
Ọ na-ejedebe abụba mpaghara
Chọrọ ịnụ ụtọ na ịzụta Kimera gị n'enweghị nsogbu na ọnụ ala dị ala? Pịa ebe a!
E kwuwerị, ị na-efula ibu? Kwesịrị ya?
Ee ... Ọ bụrụ na ịchọrọ ngwaahịa nke ga-enye gị ọtụtụ elele na nsonaazụ ngwa ngwa na nsonaazụ kwesịrị ịnwale kimera. N'ihi na n'eziokwu ọ bụ ngwaahịa dị mma, dị oke njọ na nke ahụ ga-enye gị nsonaazụ ị na-achọ. Na mgbakwunye na uru niile edepụtara n'elu, ị nwere ike nweta ya ngwa ngwa na ngwa ngwa na Onofre na ọnụahịa a na-agaghị anabata.
Echefula ohere ahụ, ọ bụghị ihe ijuanya na ngwaahịa a na-eme nke ọma, enwerelarị puku puku mmadụ mezuru ma nwee obi ụtọ. Ka anyi nwaa?
Ọ bụrụ na ị jirila mbụ na Kimera, mee ka anyị mara na uru ndị ị hụrụ. Ọ bụrụ na ị ka nwere ajụjụ ọ bụla, biko hapụ ajụjụ gị n'okpuru. Anyị ga-aza ozugbo enwere ike.
76 echiche na “Kimera: Ebee ka izu? Olee uru ọ bara? Gịnị mejupụtara? N'ezie na-arụ ọrụ? Anyị na-agwa gị ihe niile!"
March 24, 2017 na 09:09 am - Dezie
hello, m na agba oso kwa ubochi, enwere m ike iji kimera o wetara m ihe? yana ezigbo nri n’ezie.
Eprel 5, 2017 na 02: 29 pm - Dezie
Ndewo, ana m azụ na elekere isii nke mgbede. Enwere m ike ị were okpu 18 ugboro abụọ n’elekere anọ nke mgbede ma ọ bụ tupu?
Eprel 16, 2017 na 18: 46 pm - Dezie
otú kacha mma iji? Achọrọ m ịzụta karịa amaghị m etu esi ewere ya.
Eprel 24, 2017 na 16: 24 pm - Dezie
enwere m ike iwepu okpu agha abuo tupu ihe a emee
Mee 21, 2017 na 02:14 pm - Dezie
Helo! M na-afeedingu ara, enwere m ike iwere kimera?
Mee 22, 2017 na 10:16 pm - Dezie
June 28, 2017 na 20:46 pm - Dezie
Enwere m ike ịre mkpụrụ ọgwụ 2 n'otu oge?
Ọgọst 22, 2017 na 13:30 am - Dezie
You bụghị ...
September 12, 2017 na 13:29 am - Dezie
Ndewo: N’oge na-adịbeghị anya, amalitere m ebe mgbatị dị n’obodo m. Ma mgbe izu ole na ole (2) gasịrị, azụrụ m Kimera iji nyere m aka ifelata. Ruo ugbu a, enwebeghị m oké ụjọ, na-atụgharị obi. M na-ekwu na tupu ịmalite mgbatị ahụ enwere m nyocha ọhụụ. Banyere ihe ọ dị ka ọ ga-ewere. Feel na-eche na ahụ gị dị ọkụ, na ike karịa ike ọgwụgwụ. Oge ike ọgwụgwụ a bụ ihe dị oke mma. Adịghị m ike gwụrụ na-eme mmega ahụ na ahụ ike. N’echi ya, ahụghịkwa m ụfụ. Ana m ewere 1 capsule kwa ụbọchị. Ugbu a, m ga-amalite na capsules 2 otu ụbọchị. Otu tupu nri ehihie na otu tupu ọzụzụ.
Ọ bụrụ na ọ bara uru? N'uche m ee! Ngwaahịa a na-ewetafe na nkwa ya! Ka a pụọ
Lee mgbe emechara. Taa m bụ 83,3 mgbe m malitere were 84,7 na mgbe m bidoro mgbatị ahụ bụ 87,9
Echetara m na ejiri m ya ụbọchị 3 na naanị otu capsule.
September 20, 2017 na 17:31 am - Dezie
Kimera ọ na-ewere ya tupu ọzụzụ ma ọ bụ mgbe ọzụzụ?
Ọktọba 22, 2017 na 10: 56 pm - Dezie
Kedu oge kacha mma iji were ya? Ogologo oge ole ka m ga-eji kimera tupu ọzụzụ?
November 10, 2017 na 09:36 am - Dezie
Mkpụrụ ọgwụ ole ka m ga-a ?ụ?
Febụwarị 8, 2018 na 11: 55 pm - Dezie
Tamara - Onye nchịkwa
Febụwarị 15, 2018 na 10: 19 pm - Dezie
A na-atụ aro ka ị rie ya oge 30 tupu ọzụzụ
Mee 1, 2018 na 07:45 pm - Dezie
Enwere m ike iburu okpu mmiri abụọ kwa elekere na njem, na ebumnuche ịgba ọkụ.
Ọgọst 15, 2018 na 21:42 am - Dezie
Ka chifoo. Ana m ewere Amato maka migraine, enwere mgbochi na ojiji nke Kimera?
November 26, 2018 na 23:29 am - Dezie
Nri nwere protein
Obi mgbawa - Ihe na-akpata na Ọgwụgwọ